Muqdisho:-Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu walaac xoog leh ka muujinayaa jahawareerka iyo hubanti la’aanta xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka. Goluhu wuxuu ka walwalsan yahay in muddo xileedkii Hay’adaha Dastuuriga ah uu idlaaday, isla markaana uusan jirin heshiis siyaasadeed oo looga gudbo xilliga kala guurka siyaasadeed.
Sidaa darteed ayuu Goluhu ku baaqayaa in ay shir deg deg ah isugu yimaadaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskii doorashooyinka ee 17ka September.
Golaha wuxuu taageerayaa soo jeedinta Dawlad Goboleedka Puntland, Jubbaland iyo guddoomiyaha Aqalka Sare ee ahaa in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho, lana ballaariyo ka soo qaybgalayaasha, beesha caalamkana ay goobjoog ka ahaato.
Goluhu wuxuu caddaynayaa in mudane Maxamad C/llaahi Farmaajo uu yahay madaxweyne muddo xileedkiisii dhammaaday, shirkana uu kaga soo qaybgeli karo oo keli ah murashax la mid ah murashaxiinta kale ee u taagan xilka Madaxweynimo, haddii uusan tartanka ka tanaasulin.
Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed deganaan iyo ilaalinta sharciga iyo kala danbaynta. Goluhu wuxuu ka digayaa in shacabka lagu dul hayo mas’uuliyiin muddo xileedkoodii dastuuriga ahaa uu dhammaaday.